डेढ वर्षिया छोराकि आमाको फेसबुकबाट अर्को पुरुषसँगको प्रेम देखेर दुनियाँ हैरान – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > डेढ वर्षिया छोराकि आमाको फेसबुकबाट अर्को पुरुषसँगको प्रेम देखेर दुनियाँ हैरान
admin October 24, 2020 जीवनशैली, समाज	0
काठमाडौं । प्रेम अन्धो हुन्छ हामीमध्य धेरैले सुनेका छौँ । यस्तै घटना अहिले भारतबाट बाहिर आएको छ । एक महिला उनको प्रेमीलाई भेट्न बिहारबाट उत्तर प्रदेशको बलिया पुगेकी छिन् । डेढ वर्षीय छोराकी आमासमेत रहेकी महिलाको प्रेम देखेर सबै हैरान छन् । तर प्रेमी भेट्न गएकी राधिकालाई उनकै प्रेमी रोशनले नियन्त्रणमा लिएको खुल्न आएको छ । जानकारी प्राप्त भएपछि आफन्तहरू प्रहरीको चौकीमा पुगेका थिए ।
बिहीबार नै प्रहरीले राधिकालाई रिहा गरी परिवारको जिम्मा लगाएको छ । यो घटना हल्दी प्रहरी चौकी क्षेत्रको गाउँमा भएको थियो । बिहारको नेवाडा निवासी राधिकाले हल्दी प्रहरी चौकी क्षेत्रका गाउँले रोशनलाई साथी बनाएकी थिइन् । जब ती दुई बिच कुराकानी सुरु भयो तब विस्तारै प्रेमसम्म पुग्यो । जानकारी अनुसार पहिले नै विवाहित र डेढ वर्षको छोराको आमा भए पनि राधिका रोशनको मायामा यति पागल भईन कि नेवाडाबाट छोरा लिएर बलिया पुगिन् ।
आरोप छ कि रोशनले उनलाई घरमा नियन्त्रणमा राखेका थिए । कुनै न कुनै तरिकाले राधिकाले उनको परिवारको सदस्यलाई फोनबाट घटनाको बारेमा छिमेकी महिलाको मोबाइलबाट जानकारी गराइन् । जब परिवारका सदस्यहरूले थाहा पाए तब उनीहरु स्थानीय बजारको एउटा घरमा फेला परेका थिए ।
त्यसपछि उनीहरुले प्रहरीलाई उक्त घटनाबारे अवगत गराए । सूचना पछि प्रहरी आइपुगेपछि राधिका र उनका बच्चालाई उद्धार गरी सोधपुछ गरेपछि परिवारका सदस्यहरूलाई हस्तान्तरण गरियो । उनले आफ्नो परिवारलाई भेट्ने बित्तिकै, रुँदै आइन् ।
प्रहरीका अनुसार महिलाका परिवारका सदस्यहरू आफ्नी छोरी पाउँदा खुःशी छन् । उनीहरु त्यस केटा विरुद्ध कुनै कारबाही चाहँदैनन् । यद्यपि उनीहरुलाई नियन्त्रणमा राखिएको थियो वा आफ्नै खुःशीले बसेका थिए भन्ने कुराको अनुसन्धान भइरहेको छ । नोटः माथि उल्लेख गरिएका नाम (राधिका र रोशन) नाम वास्तविक नाम होईनन् । घटना सत्य भए पनि नाम विशेष कारणवश परिवर्तन गरिएको हो । धन्यवाद फाइल फोटो
आज बडादशैँको आठौँ दिन ,महाअष्टमी पर्व, – दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरि मनाइँदै…!
कोरोनाबाट अमेरिकामा हजारौंको निधन हुनथालेपछि चिहानमा देखियो यस्तो भावुक बनाउने दृश्य! (तस्विरहरू सहित)
काठमाडौँको गल्लीमा भविष्य खोज्दै दृष्टिविहिन चेली! यति मिठो स्वरमा गित गाउदा सबै भावुक (भिडियो सहित)